Akon’ny baolina kitra | NewsMada
Frantsa: Hilalao ao amin’ny Lille i Sedera
Araka ny vaovao, hita tao amin’ny tambanjotran-tserasera, ny zoma lasa teo, hanatevina ny ekipan’ny Losc Lille, “Ligue 1” any Frantsa, i Evan Sedera izay vao 15 taona monja. Zanaka Malagasy i Sedera ary teraka teto Madagasikara, ny 18 mey 2005. Mandritra ny roa taona sy tapany ny hilalaovany ao amin’ny Lille, hifaninana ao amin’ny “Ligue 1”. Azo havaozina izany fifanarahana izany.
Kere any atsimo: nanome sakafo i Metanire
Noho ny fisian’ny kere mahazo ireo mpiray tanindrazana any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy, nanolotra fanomezana milanja 2 taonina, ahitana sakafo sy fanafody ary rano fisotro, ho azy ireo i Romain Metanire, vodilaharan’ny Barea de Madagascar, milalao any Etazonia. Nialoha ny niaingany ny alarobia 18 novambra lasa teo ny nanolorany izany, amin’ireo tomponandraikitra malagasy.
Côte d’Ivoire: nodimandry ny filohan’ny federasiona
Misaona ny tontolon’ny baolina kitra any Côte d’Ivoire, amin’izao fotoana izao. Fantatra mantsy fa nindaosin’ny fahafatesana, ny asabotsy 21 novambra lasa teo, i Augustin Sidy Diallo, filohan’ny federasiona ivoarianina (FIF), taorian’ny valanaretina Covid-19 nahazo azy. 61 taona izy izao nodimandry izao. Nandefa taratasy fampiononana ho an’ny fianakaviany sy ny baolina kitra ivoarianina ny federasiona malagasy (FMF).